नेपाली फिल्मको कथा चोरेर बनाइयो यो हिन्दी फिल्म, नेपाली कलाकारले जनाए विरोध (भिडियो हेर्नुस्) – Sanchar Patrika
July 19, 2020 202
काठमाडौं । नेपाली फिल्मलाई बलिउडवाट प्रभावित भएको आरोप संधै लाग्दै आएको छ । फिल्म रिलिज भएपछि त्यसलाई बलिउडको कुनै फिल्मसंग तुलना गरिन्छ । फिल्मको कथा, गीतलाई बलिउडवाट प्रभावित भएको आरोप लगाइन्छ । तर सधै नेपाली फिल्मले मात्र बलिउडवाट प्रभावित हुने होइन ।
यो फिल्म र नेपाली फिल्म ‘जात्रा’ दुवैको कथा पैसाको वरिपरि घुमेको छ । त्यसैले पनि ‘लू’ट केश’ जात्राबाट प्रभावित हुनसक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न उठाएका हुन् ।
एक फेसबूक पेजमा ‘जात्रा’ बाट फिल्म प्रभावित भएको हुनसक्ने पोस्ट गरिएपछि कतिपयले युट्बयुबमा कमेन्ट गरेर फिल्मको कपी गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘जात्रा’ मा ३ युवाको कथा समेटिएको छ, जसले भेट्याएको पैसाको बोरा लुकाउन कसरत गर्छन् । ‘शू’ट केश’ मा पनि यस्तै खालको कथा उनिएको ट्रेलरमा देख्न सकिन्छ ।
Prevजीवनकालमा सफलता कसरी पाउने ? निरोगी भई पैसा कमाएर बचत के गरी गर्ने ? लकडाउनको समयमा बच्चाहरुलाई के सिकाउने ?
Nextगोकुल बाँस्कोटाले ‘बनमा काँडा छ’ भन्दै गीत गाउँदा गायक भगवान भण्डारीले फर्काए यस्तो जवाफ
श्रीमान पहिरोमा लडेपछि श्रीमानलाई वचाउन खोज्दा छोरो पहिरोमा परी बेपत्ता,घाईते बुवालाई होलिकोप्टरबाट उद्धार